Mahadsanid — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxaan kaliya doonayaa inaan u mahadceliyo qof walba oo tukaday noo intii aannu on safar ee qaarada weyn ee Afrika. Sayidku wuxuu si raxmad leh ugu jawaabay badan oo salaadda kuwa, oo aad isticmaali dhahnay anaga ha inoo inuu saameyn ku yeesho in lix dal oo kala duwan. Safarkaasi waxa uu haatan soo dhamaaday, waxaana uu gool madax caawa.
Waxaan u mahad celineynaa lahaa aad salaadda sii safarka ammaan iyo caafimaad. dhowr A oo naga mid ah ma ay aad u fiican tahay iyo waxaan rabnaa in aan u sameeyo guriga caafimaad. Waxaan ku hanweynahay inaan dhajinta blog ah si aad dhan u sheegi ku saabsan safarka. Ilaa markaas waxaan mahad baryadiinna
Daniel mtombosola • August 19, 2013 at 7:43 waxaan ahay • Reply
Moby • August 19, 2013 at 7:44 waxaan ahay • Reply
Njerucathy • August 19, 2013 at 7:44 waxaan ahay • Reply
It is such a challenge to see and witness how you live your lives poured out to Christ. Rich is your reward… may He bless you and your families with abundant health, Aamiin.
Bradleydmv • August 19, 2013 at 7:44 waxaan ahay • Reply
Kristy Cothran • August 19, 2013 at 7:44 waxaan ahay • Reply
rebecca • August 19, 2013 at 7:45 waxaan ahay • Reply
Cera Ngunjiri • August 19, 2013 at 7:45 waxaan ahay • Reply
Josiah • August 19, 2013 at 7:45 waxaan ahay • Reply
Boyd Lawrence Zimba • August 19, 2013 at 7:46 waxaan ahay • Reply
Lusayo • August 19, 2013 at 7:46 waxaan ahay • Reply
Alexsakala • August 19, 2013 at 7:46 waxaan ahay • Reply